Sambon’Ireo Rohingya Mpitsoa-ponenana, Nolavin’i Thailand, Malezia Ary Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2015 2:44 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, русский, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy faneken'ny governemantan'i Myanmar ny vondrom-piarahamonina Rohingya. Asa tànan'i AK Rockefeller
Sambo an'arivony an'ireo Rohingya mpitsoa-ponenana avy any Myanmar no nitady fialofana tany amin'ireo firenena mifanila aminy ao Azia Atsimo-Atsinanana, fa niteny tamin'izy ireo mba hitady fanampiana any an-kafa daholo ireo firenena ireo.
Mandà ny hanaiky ireo Rohingya ho vondrona foko ny governemantan'i Myanmar, ary manao azy ireo toy ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna. Silamo mipetraka akaikin'ny sisintanin’i Myanmar sy Bangladesh ny ankamaroan'ireo Rohingya.
Mitsoaka ny haza lambo ataon'ny governemanta fehezin'ireo miaramila, niampita ny sisintany ireo Rohingyas maro mba hitady fialofana sy asa tany Thailand, Indonezia, ary Malezia. Ny sasany tratran'ireo vondrona mpivarotra olona.
Nialoha ilay ‘olan'ny sambo’ misy ankehitriny, nisy fasana iombonana hita tany Thailand, izay ahiahiana ho ‘toby famonoana’ an'ireo Rohingya vahiny tsy ara-dalàna tao amin'ilay firenena. Maherin'ny 30 isa no fatin'olona hita tao amin'ilay fasana tany amin'ny voalohandohan'ity volana ity, izay niampangain'ny Masoivohon'i Firenena Mikambana ho an'ireo Mpitsoa-ponenana (UNHCR) an'ireo mpampiampita tsymisy indrafò.
Ny herinandro lasa teo, nisy tatitra nilaza fa tratran'ireo mpiandry ny morontsirak'i Thailand, Indonezia ary Malezia ireo sambo nitondra ireo mpitsoa-ponenana Rohingya. Fa raha ny nanavotra ireo mpitsoa-ponenana no tokony ho nataon'izy ireo, nasain'ireo manampahefanan'ny morontsiraka niverina an-dranomasina indray ireo sambo.
Tany Thailand, nisy angidimby nandatsaka entana tany an-dranomasina raha toa ka tokony nanome azy nivantana tamin'ireo mpitsoa-ponenana. Taorian'izay, naverin-dàlana ilay sambo nitondra Rohingya teo amin'ny 300 isa teo. Nilaza i Major General Sansern Kaewkamnerd, mpitondra tenin'ny governemantan'i Thailand tohanan'ny miaramila, fa naverina an-dranomasina ilay sambo taorian'ny nanamboarana ny miliny sy nanomezana rano sy sakafo ireo mpitsoa-ponenana.
Niaro ny fanapahan-kevitry ny governemanta ny handà ireo mpitsoa-ponenana izy:
Araka ny lalàna Thailandezy, tokony averina any amin'ny taniny na alefa any amin'ny firenena hafa ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna rehetra. Tsy afaka ny hitoetra eto izy ireo. Efa nanao izay mety rehetra izahay teo amin'ny lafiny fotokevitra maha olona. Raha toa ka ho tsikeraina amin'izany izahay, tianay anontaniana ireo mitsikera anay hoe inona no nataon'izy ireo raha toa ka niseho tany amin'ny firenen'izy ireo izany.
Niaraka tamin'izany, nandà ny tsy nahavitany nanome fanampiana araka ny maha olona ireo mpitsoa-ponenana Rohingya ny governemantan'i Malezia, na teo aza ny lazany mampalahelo amin'ny tsy fanomezana fiarovana ireo mpitsoa-ponenana.
Nilaza Mr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, izay Lefitry ny Minisitry ny Atitany, fa nikarakara tsara araka ny maha olona ireo Rohingya ireo manampahefana, na tsy ara-dalàna aza ny fidirany tany Malezia. Nampiany fa tsy tokony hiditra ny firenena ireo mpitsoa-ponenana sy ireo mpifindra monina:
Tsy maintsy mandefa ny hafatra marina izahay, hoe tsy tongasoa izy ireo aty.
Manakaiky eo, niaiky Indonezia fa tamin'ny voalohandohan'ity volana ity dia nandefa niverina ny sambo iray feno mpitsoa-ponenana, ary nandefa azy ireo tany Malezia, araka ny Human Rights Watch.
Nanakiana an'i Myanmar i Phil Robertson, tale lefitry ny Human Rights Watch Azia, tamin'ny fanenjehany ireo Rohingya voahilikilika, ary nalahelo tamin'ny fihetsik‘ireo governemantan'i Thailand, Indonezia, ary Malezia tamin'ny nandàvan'izy ireo ny hanampy ilay sambon'ny mpitsoa-ponenana:
Nanao ny zavatra ratsy indrindra i Thailand, Malezia, ary Indonezia, tamin'ny politikany tsy mba misy fiantràna, hanosehana ity andiany vaovao anà ‘vahoaka an-tsambo’ ity, izay mametraka ny ain'ireo olona an'arivony manoloana ny loza mety hitranga.
Naneho ny ahiahy mitovy amin'izay ihany koa ny UNHCR. Manazava i Volker Türk, lefitry ny Kaomisera Ambony ao amin'ilay fikambanana, fa fisehon'ny fahaverezan-kevitra tanteraka ananan'ireo vahoaka avela tsy hanana safidy afa-tsy ny manao vy very ny ain'izy ireo ny fiampitàna ny ranomasina:
Ny manavotra ireo aina aloha no mahamaika voalohany. Raha toa ka ilaozana miady hiala amin'ny fandraisana andraikitra, tokony ho zava-dehibe amin'ireo firenena ny mizara ny andraikitra amin'ny fampidinana an-tany maina ireo olona ireo avy hatrany.
Nanameloka ny Fikambanan'ireo Firenena ao Azia Atsimo-Atsinanana i Charles Santiago, izay mpikambana ao amin'ny parliemanta any Malezia, tamin'ny fanambaràny tao amin'ny Facebook, amin'ny tsy fahaizany mandray fepetra iraisana mba hamahàna ilay olana:
Efa mitaritarika any aoriana ny ASEAN – tokony efa nalamin'ireo filoham-panjakàna ilay olàna goavana mikasika ny fifindramonina faoben'ny Rohingya, izay nihanitombo ny volana Jona 2012, taorian'ny herisetra notohanan'ny fitondrana, tamin'ny fihaonana an-tampon'ny ASEAN nifanarahana vao haingana. Tsy nahavita niresaka momba io olanà lehibe io ry zareo satria mety hitondra any amin'ny fijerena ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona faobe ataon'ny Birmanie amin'ireo Rohingya izany.
Ao amin'ny Facebook, mikapoka noho ireo “fitsarana an-tendrony ara-poko” ataon'ireo tompon'andraki-panjkàna Maleziana ny vondrona iray manohana ny Rohingya:
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanapahan-kevitr'i Malezia tsy hamela ireo mpitsoa-ponenana Rohingya voahilikilika mba ho arovana, homena sakafo, homena rano ary hilevina, ao amin'ny firenena, ny fitsarana an-tendrony ara-poko. Angamba misy endrika sasany ao amin'ny fiarahamonintsika te-hahita ireo Rohingya hiverina any Bangladesh sy Myanmar mba hiatrika ny famonoana faobe ary ny haza lambo.
Maro ireo mpampiasa Twitter manerana ny tany no mitovy fihetseham-po tahàka izany momba ny fanelezana tsy an-drariny ireo Rohingya:
Olan'ny tany tontolo ny #Rohingya. Tokony ho vahan'ny rehetra miaraka io olana io ary ho afaka mitoetra any amin'ny firenena rehetra izy ireo.
Ho an'ireo milaza tsy mila mpitsoa-ponenana, tiako handeha ho any Malezia, hijery ireny ankizy mangataka sakafo ireny #Rohingya
Tezitra ny sasany hoe tsy manohitra ny governemantan'i Myanmar ireo filoha any amin'ny faritra:
Samy milaza daholo ireo governemanta rehetra fa tsy olan'izy ireo ny #Rohingya, tsy afaka mamela azy ireo miditra, misy an'arivony hafa koa any amin'ny tany niavian'izy ireo. Fa tsy misy manohitra ny governemantan'i #Birmanie na dia iray aza.
Arovy ireo #Rohingya avy amin'ny Weadee Patani #varotraolona
Fitsapàna lehibe ny mahaizy ny #ASEAN ny hetsika ataony amin'ny #Rohingya. Firenena mahay mangoraka ve isika sa tsy misy fo?
Satria miparitaka ny hatezeran'ny vahoaka nohon'ny tsy firaharahiana ireo zon'ny Rohingya vitsy an'isa, antenaina fa hanery ireo filoha any amin'ny faritra ny fiarahamonina iraisam-pirenena, mba hanohitra ny governemantan'i Myanmar ary hampitsahatra ny fanitsakitsahana iaretan'ireo olom-pirenena ‘adino’ any Azia Atsimo-Atsinanana.